Adobe InDesign • VECTOR
Adobe InDesign ဆိုတာ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ သတင်းစာတွေ ၊ ဂျာနယ် မဂ္ဂဇင်းတွေ ၊ပိုစတာတွေ၊ ပုံနှိပ်ခြင်း နဲ့ ဒီဂျစ်တယ် မီဒီယာတွေ ၊Ebook တွေ ၊ flyers နဲ့ brochures တွေ၊ ဖန်တီးရာမှာ”မရှိမဖြစ် မိုး” လို့ ပြောရလောက်အောင် အသုံးတည့်လို့ နေပါတယ်။ အရည်အသွေး ပြည့်ပြည့်၀၀ နဲ့ သေသပ် လှပ ခန့်ညားတဲ့ Layout ဒီဇိုင်း တစ်ခုကို မျက်စိတစ်မှိတ် လျှပ်တစ်ပျက်အတွင်းမှာပဲ လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါတယ်။ CC Libraries ရဲ့ ဖြည့်ဆည်းထောက်ပံ့မှုကလည်း” လိုတိုင်းရစေ ကြိုးနှယ်ခွေ “ ဆိုတာလို ဖြစ်တာ ကြောင့် အဆင်ပြေလွန်းမက ပြေလှပါတယ်။ တကယ်တော့ Adobe InDesign ဆိုတာ Adobe Pagemaker ရဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလို့ ပြောရင်လည်း ရမယ် ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့တုန်းဆိုတော့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းက ထုတ်တာ မို့လို့ပါ။ နောက်တစ်ခုက Adobe Pagemaker 7.0 နောက်မှာ ဆက်ပြီးမထုတ်တော့ပဲ Adobe InDesing ကိုပဲ Update တွေ အမျိုးမျိုး နဲ့ Adobe InDesign CS6 အထိ အဆင့်မြှင့်တင်လာခဲ့တာပါ။ ဒီလိုနဲ့ Adobe က CS6 ကို Creative Suite ရဲ့နောက် နောက်ဆုံး ဗားရှင်း ဖြစ်ပါတယ်လို့ 2013 မေလ(၆)ရက်နေ့မှာ ကြေငြာခဲ့ပြီး Adobe Crative Cloud အဖြစ် ဆက်လက်၍ လစဉ်ကြေးပေးသွင်းမှုကို အခြေခံတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ပြောင်းခဲ့ရာက အခုဆို Adobe InDesign CC 2020 ကိုတောင် ရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် နေ့စဉ် နာရီနဲ့အမျှ Update ဖြစ်နေချိန်မှာ နောက်ကျ ကျန်ရစ်သူ မဖြစ်စေဖို့ Adobe InDesign CC 2020 နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းကြေး = 35,000 Ks
For who? ဘယ်သူတွေအတွက်လဲ?
စာအုပ်စာစောင်တွေ၊ ဂျာနယ် မဂ္ဂဇင်းတွေ ၊ပိုစတာတွေ၊ ပုံနှိပ်ခြင်း နဲ့ ဒီဂျစ်တယ် မီဒီယာတွေ ၊Ebook တွေ ၊ flyers နဲ့ brochures တွေ ကို ခေတ်မှီ မြန်ဆန်စွာ ဖန်တီး ချင်သူတွေ အတွက် သာမက ကီးဘုတ်လက်ကွက်လောက်ပဲ နှိပ်တတ်တဲ့ အဆင့်ကနေ စာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းတွေမှာ အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ လက်တွေ့ အလုပ်လုပ်ချင်သူတွေ အနေနဲ့လည်း မဖြစ်မနေသင်ယူထားရမှာပါ။
What will you learn? ဘာတွေလေ့လာရမှာလဲ?
နေ့စဉ် နာရီနဲ့အမျှ Update , Update နဲ့ ဖြစ်နေချိန်မှာ Adobe InDesign CC 2020 ကို လေ့လာလိုက်ယုံနဲ့ အချိန်မကုန် ငွေမပမ်းပဲ ( D T P )လို့ခေါ်တဲ့ desktop publishing နဲ့ပတ်သက်တာတွေကို All in One အဖြစ်နဲ့ ရသွား မှာပါ။
InDesign Intro Sample Lesson
03-Adding or editing text
03-B-Save and Save As
05-Bullet and Numbered
07-Ruler and Measurement Units
08-About pages and spreads
010-Draw with lines and shapes
011-paths and shapes
013-Add or delete anchor points
014-Convert between smooth points and corner points-02
015-Pencil Tool and Smooth Tool
017-Change corner appearance
018-Compound paths and shapes
020-Gradient Panel and
023-Create paths from text outlines
026-Align Object and Duplicating Objects
027-Work with frames and objects
030-Rectangle Tool and corner effects
034-Convert tables to text
035-Merge cells and Unmerge cells
036-Combine tables and Convert existing rows to header or footer rows
037-Change the alignment of text withinatable cell
038-Table strokes and fills
040-Export to Pdf
041-Missing Fonts and Prefligh-01